Badhasaabada Gobalada Bariga Somaliland Oo Hargeysa Fadhiya Iyo Xukuumada Madaxwayne Biixi Oo Ka Goysay kabkii Dhaqaale Ay Siin Jirtay Gobalada Bariga.
Wednesday October 10, 2018 - 10:58:12 in Wararka by Hargeisa Head OFFICE
Xukuumada madaxwayne muuse biixi cabdi ayaa tan iyo intii ay talada dalka la wareegen ayna wax hour mar ah oo la taaban karo ka samayn gobalada bariga Somaliland xukuumada ayaa ka joojisay kabkii ay wasaarada maaliyadu siin jirtay gobalada bariga iyo dawldaha hoose .
Xukuumada madaxwayne biixi ayaa horumaro laxaad leh ka wada gobalka gabilay oo uu deegan ahaan kaso jeedo madaxwaynaha Somaliland iyo tirade ugu badan xukuumadiisa taasna waata ay ka qaylinayaan shacabka soamaliland ee ku dhaqan gobalada bariga iyago aan waxba ka hayn xukuumadii iyo madaxwaynihii ay doorteen .
Badhsaabada gobalada saraar, hawd iyo odwayne iyo sanaag ayaa maalmihii udanbeyay la arkaayey iyagoo ku sugan magalada hargeysa iyago la waxay la hortagaan shacabkii ay maamulayeen ee madaxwaynaha Somaliland uu uxilsaray taasna ay usababaynaya dhaqaalo la’aanta ka jirtay gobalada bariga Somaliland oo xukuumada madaxwayne biixi ka hor istaagay dhaqalihii ay shacabka wx ugu qaban lahayeen.
Madaxwaynaha muuse biixi iyo xukuumadiisa oo badankoodu kaso jeedan gobalada galbeedka Somaliland ayaa dhagaha ka furaystay dhawaqa iyo yeedhmada shacabka is daba jooga ah uso diraaya xukuumada madaxwayne biixi .
Xukuumada ay aa wada dhismo yaal ay ku rarayso aqalada looga arimiyo dalka Somaliland taas oo loo raraayo daanta madaxwayne biixi iyo faamilkoodu ka dagaan caasimada hargeysa.